Shina · Marsa, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Marsa, 2011
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Marsa, 2011
Shina: Voasakana Ireo Protocoles-n'ny PTP sy L2TP VPN
GV Mpisolovava 27 Marsa 2011
Fanavaozana tamin'ny 22 Martsa: mpamaky iray no nilaza taminay tamin'ny alalan'ny mailaka fa fa ny sasantsasany amin'ireo protocoles PPTP sy L2TP ihany no voasakana sy tapaka any Shina ary tsy manana olona miditra amin'ny alalan'ny PPTP sy L2TP izy avy any Beijing. Ny mpampiasa sasany avy any Guangzhou dia manamarika...
Shina: Cybercafé 130.000 No Nakatony Tao Anatin'ny Enina Taona
Araka ny “tatitra Tsenan'ny Cybercafé Shina taona 2010″ navoakan'ny Ministeran'ny Kolotsaina tamin'ny 17 Martsa 2010, maherin'ny 130.000 ireo cybercafé tsy ara-dalàna nakatona tao anatin'ny 6 taona. Ankoatra ny fanakatonana ireo cybercafé tsy ara-dalàna dia nampiditra fandrindràna vaovao ihany koa ny governemanta ka nametraka sazy henjana mba hanilihana ireo cybercafé madinika...
Hong Kong (Shina) 18 Marsa 2011
Nanomboka ny volana desambra 2010, niatrika ny tsy fahampian'ny ronono vovony ho an-jazakely i Hong Kong noho ireo mpividy avy any Shina mividy rononon-jaza betsaka ao Hong Kong ary manangona izany mba hampiasaina rehefa tsy miasa amin'ny Taombaovao Shinoa. Nangataka fanadihadina avy amin'ny governemanta ny ray aman-dreny hongkongais, nanolo-kevitra izy...
Shina: Nifandrombahana ny nividy sira
Japana 18 Marsa 2011
Sady manafintohina no mampahonena ireo fihetseham-po tao Shina taorian'ny horohorontany, tsunami sy ny loza nokleary tao Japana, mbola sarotra ny fahatsapan'ireo firenena ny zava-nitranga tao Japana . Nanjary fanararaotana ho an'i Shina ny faharavana niseho tao Japana mba hilazany ny fikasany amin'ny hoavy. Niseho tamin'ny Alarobia hariva ny fiantraikan'ny horohorontany tany Japana raha...
Fampandrosoana 07 Marsa 2011